सर्वोच्चका न्यायाधीश रेग्मीमाथि मुद्दा चल्ने सम्भावना कति ? | Ratopati
जग्गा किनबेचमा लाभ लिने सबै तानिने संकेत
personमदन ढुङ्गाना exploreकाठमाडौं access_timeपुस २३, २०७८ chat_bubble_outline0
करिब ३ वर्षको अनुसन्धानपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणको प्रतिवेदन बिहीबार सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको छ । लामो समय अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यक्तिहरूको रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको सीआईबीले बताएको छ ।
बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने सम्बन्धमा सुरुवातदेखि हालसम्म संलग्न रहेकाहरूको फेहरिस्त निकाल्दै उनीहरूमाथि मुद्दा दर्ताको तयारी गरिएको छ । सीआईबीले सुरुवाती चरणमा ४१० जनामाथि मुद्दा चल्नुपर्ने भन्दै टिप्पणी उठाएको थियो । सोही आधारमा पक्राउ पुर्जीको तयारी भए पनि पछि केही व्यक्तिहरूमाथि पक्राउ पुर्जी भने जारी गरिएको थिएन । यद्यपि सीआईबीले ‘सर्ट लिष्टिङ’ गरेका ४१० जनामध्ये केहीलाई छाडेर बाँकी सबैमाथि मुद्दा दर्ताको तयारी भएको बुझिएको छ ।
जग्गा किनबेच गर्नेमाथि पनि मुद्दाको तयारी
ललिता निवास प्रकरण को–को माथि कसरी मुद्दा दर्ता हुँदै छ भन्ने सम्बन्धमा सीआईबी र सरकारी वकिल कार्यालयले केही बोलेको छैन । तर सीआईबीले मुद्दा चलाउनुपर्ने ४१० जनाको सर्ट लिष्टिङ गर्दा जग्गा किनेर बेचिसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा लैजाने तयारी गरेको थियो । त्यसै प्रयोजनका लागि पक्राउ पुर्जी लिन काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिँदा अदालतले केही व्यक्तिको पक्राउ पुर्जी खारेज गरिदिएको स्रोतले रातोपाटीलाई बताएको छ । पक्राउ नगरे पनि उनीहरूमध्ये अधिकांश व्यक्तिमाथि मुद्दा चल्ने तयारी भएको स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।
सीआईबीले हाल सरकारी कागजात किर्ते गरी सरकारी सम्पत्ति हत्याएको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो । दूषित लिखत बदर गर्ने र सरकारी जग्गा किनबेच गरी लाभ लिने व्यक्तिहरूलाई समेत मुद्दाको प्रतिवादी बनाउँदा मुद्दाले चाँडै निकास पाउने भन्दै सीआईबीले सबैमाथि मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो । सीआईबीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्न लागेको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाउने भनेका व्यक्ति पनि समावेश हुने स्रोतको दाबी छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र विष्णु पौडेलका छोरा नवीन अब सरकारी साक्षी !
न्यायाधीश कुमार रेग्मीमाथि मुद्दाको सम्भावना कति ?
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा धेरैपटक किनबेचसमेत भइसकेको पाइएको छ । ती जग्गाहरू प्राप्ति वा बेचबिखन गर्दा कतिपयले राम्रै लाभ लिएका छन् । लाभ लिने व्यक्तिमध्ये एक हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी पनि हुन् । रेग्मीले २०६१ साल माघ ११ गते ललितानिवासमा रहेको कित्ता नम्बर ४४ बाट ५ आना ३ पैसा, कित्ता नम्बर ४६ बाट ५ आना ३ पैसा र कित्ता नम्बर १६५ बाट २ पैसा २ दाम जग्गा पाएका थिए । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट उनले राजीनामा पास गरेर उनले उक्त जग्गा लिएको र उक्त जग्गा रेग्मीले खरिद गरेको नभई भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक मीन बहादुर गुरुङसँग लिएको मात्रै उल्लेख गरेका थिए । रेग्मीले यसअघि नै दिएको स्पष्टीकरणमा आफूले उक्त जग्गा मीन बहादुर गुरुङबाट पाएको र उक्त जग्गा मीन बहादुर गुरुङलाई कानुनी सहायता दिएबापत लिनुपर्ने रकमबाट लिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
रेग्मीले ललिता निवासको उक्त जग्गा कति मूल्यमा लिखत पास गरेका थिए भन्ने स्पष्ट छैन यद्यपि उनले त्यो जग्गा २०६४ साल साउन ६ गते बिक्री गरिसकेका छन् । कुल १२ आना, २ दाम जग्गा मध्ये हाल उनको नाममा करिब १ आना १ पैसा जग्गा मात्रै उनको नाममा रहेको थियो । उक्त जग्गा पनि ललिता निवासको खोजबिन हुनेबित्तिकै उनले सरकारको नाममा गर्न मञ्जुरी दिएकाले सरकारको नाममा गइसकेको छ ।
करिब ३ वर्ष आफ्नो नाममा उक्त जग्गा राखेर बिक्री गर्दा रेग्मीले राम्रै आर्थिक लाभ लिएको सीआईबी स्रोतले दाबी गरेको छ । जग्गा किनबेचमा संलग्न भएर लाभ लिएका कारण रेग्मीमाथि पनि मुद्दा चल्नुपर्ने सीआईबीको जिकिर थियो ।
स्वीमिङ पुल र चिल्ड्रेन पार्कका लागि छाडेका थिए जग्गा
भूमाफियाको सेटिङमा व्यक्तिको नाममा बनाइएको सरकारी जग्गा प्लटिङ गरेर त्यहाँ स्वीमिङ पुल, ब्याडमिन्टन कोर्ट र चिल्ड्रेन पार्कसमेत बनाउने योजना थियो । व्यवस्थित बसोबास भन्दै उक्त स्थानमा सबै सुविधा रहने गरी योजना बनाइएको थियो । रेग्मीले जग्गा पाइसकेपछि उक्त योजना बनेको कारण उक्त जग्गाको केही हिस्सा छोड्नैपर्ने भएकाले रेग्मीले करिब ११ आना जग्गा बेचबिखन गरी बाँकी जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छोडेका थिए ।
तत्कालीन समयमा कानुन व्यवसायी रहेका रेग्मी पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बने । न्यायाधीशमाथि मुद्दा चल्न सक्ने सम्भावना र पक्राउ पुर्जी जारी हुने सम्भावना ज्यादै न्यून हुन्छ । तर तत्कालीन समयमा पदीय जिम्मेवारीमा नरहेका र तत्कालीन समयमै सरकारी कागजात किर्ते भएको कारण उनीमाथि पनि मुद्दा चल्नुपर्ने सीआईबीको जिकिर छ ।
रेग्मीमाथि मुद्दा लैजानेपर्ने दबाबमा सीआईबी
रेग्मीले २०६१ सालमा जग्गा प्राप्ति गर्दा र २०६४ सालमा बिक्री गर्दा उनले आर्थिक लाभ लिएको मालपोतको श्रेष्ताबाट देखिएको स्रोतको दाबी छ । सरकारी जग्गा किनबेचबाटै लाभ लिएको कारण रेग्मीमाथि पनि मुद्दा चल्नैपर्ने स्रोतको दाबी छ ।
सीआईबीले जग्गा किनबेचबाट लाभ लिने सबै व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाउँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रेग्मीमाथि मुद्दा नचलाउने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । यदि अन्य व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउने र न्यायाधीश रेग्मीमाथि मुद्दा नचलाउने हो भने सीआईबीको मनसाय दूषित ठहरिने स्पष्ट छ । सोही कारण पनि सीआईबी सर्वोच्चका न्यायाधीश रेग्मीमाथि पनि मुद्दा लैजानेपर्ने दबाबमा छ ।
मुद्दा दर्ता भए स्वतः निलम्बित
ललिता निवासको जग्गा किनबेच प्रकरणमा यदि सीआईबीले बीचमा जग्गा किनबेच गर्ने र आर्थिक लाभ लिने सबैमाथि मुद्दा गर्ने हो भने सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीमाथि पनि मुद्दा दर्ता हुनेछ । तर बहालवाला न्यायाधीशमाथि मुद्दा दर्ता गर्न न्याय परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले केही कठिनाइ भने हुन सक्छ । यद्यपि यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन समयमा भौतिक योजना मन्त्रालयमा कानुनका उपसचिव रही चितवन जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेकै समयमा न्यायाधीश विनोद गौतममाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही आधारमा उनी निलम्बनमै छन् । गौतमले न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई मात्रै भएको भन्दै आफूविरुद्ध मुद्दा चल्नै नसक्ने जिकिर गरेका थिए । उनको मुद्दा यतिबेला पूर्ण इजलासमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ । यद्यपि उनीमाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा भने उनी स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् ।
यस्तो छ ललिता निवासमा घोटालाको फेहरिस्त
#ललिता निवास#कुमार रेग्मी